ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း – Myanmar Live
ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး / မြန်မာ
ထပ်ဖမ်းပြန်ပြီဟေ့!! မလေးးရှားသွားမယ့်မြန်မာ ၈ ဦး ထိုင်းနိုင်ငံကို တရားမ၀င်ဖြတ်ကျော်
June 12, 2019 June 12, 2019 - by BB
ထိုင်းစစ်သားနဲ့နယ်ခြားစောင့်တပ်သားများပူးပေါင်းပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စဒေါင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကားလမ်းနံဘေးတောစပ်တစ်နေရာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းရာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါတယ် ယင်းတို့ကိုစစ်ဆေးရာပန်းရောင်ရှိနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနဲ့တကွ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခွင့်စာရွက် (Border …
ကမ္ဘာ့သတင်း / ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး / မြန်မာ
၀င်ရောက်ဖမ်းဆီး !! တရားမ၀င်မြန်မာ ၁၄ ဦးသေလုနီးပါးဖြစ် နိုင်ငံကူးဖို့ပွဲစားစောင့်ဆိုင်း
May 24, 2019 May 24, 2019 - by BB
ပြီးခဲ့သည့် ၂၂ ရက်နေ့တွင် စွန်းခလားခရိုင် ကလမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိနေအိမ်တစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့်အခြားပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များပိုက်စိတ်တိုက်ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ မြန်မာနိုင်ငံသားအမျိုးသမီး ၅ ဦး …
ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး / မြန်မာ
မြန်မာအကျဉ်းသား ၅၉ ဦးလွတ်မြောက်!! တော်ဝင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိ
May 23, 2019 May 23, 2019 - by BB
ပြီးခဲ့သည့် ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ရနောင်းခရိုင်ရှိ ပရာဖာခန်ဆိပ်ခံတံတားတွင် ထိုင်းဘုရင်နန်း တက်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ဖြင့်တော်ဝင်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအကျဉ်းသား ၅၉ …
ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း(အီဆန်) / ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း / ဘန်ကောက်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက် / သတင်းများ
သတိပေးပြီ!!! ထိုင်းနိုင်ငံမြို့နယ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် မိုးကြီးမည်
February 25, 2019 February 25, 2019 - by PCHB
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ မိုးလေ၀သဦးစီးဌာနမှ ၂၄ နာရီစာ မိုးလေ၀သ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံ …
Entertainment / ကမ္ဘာ့သတင်း / ကျန်းမာရေး / ခရီးသွား / စက်ရုံအလုပ် / စားသောက်ဆိုင်အလုပ် / တစ္ဆေအကြောင်း / ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်း(အီဆန်) / ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း / ပရိုမိုရှင်း / ဘန်ကောက်နှင့်အနီးတစ်ဝိုက် / ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း / လိင်အကြောင်း / လူနေမှုပုံစံ / သတင်းများ / သီချင်း / အကျင့်စရိုက်ခန့်မှန်းချက် / အစားအစာ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး / အလှအပ / အားကစား / အိမ်ဖော်အလုပ် / အိုင်တီ / အခြားအလုပ်များ / ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် / ဖျော်ဖြေရေး / ဗေဒင် / မြန်မာ
Myanmar Live သတင်းစာဂျာနယ်ရဲ့ အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့နေရာ
February 14, 2019 February 14, 2019 - by K.Khongsub
စက်ရုံအလုပ်ရုံ – Thaveevong Industry – Inteqc Group International Section – …
ထိုင်း / ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း / သတင်းများ / အလုပ်သမားရေးရာသတင်း / မြန်မာ
ချင်းမိုင် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးမှ လူသစ်များကိုဘတ်ရိုက်ပေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိကြောင်း သတိပေးထုတ်ပြန်
February 12, 2019 February 12, 2019 - by PCHB
ချင်းမိုင်ခရိုင် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးမှ လူသစ်များကိုဘတ်အသစ်ရိုက်ပေးမည်ဟု၍သတင်းအမှားတွေ ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို တွေ့ရှိပါသဖြင့်၊ အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးမှ ချင်းမိုင်ခရိုင်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များအားလုံးကို၊ သတင်းအမှားတွေဖြစ်ကြောင်း၊ လူသစ်များကိုဘတ်အသစ်ရိုက်ပေးဖို့၊ …